Gîte de la TUILE BLEUE - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFlorence
I-GITE DE LA TUILE BLEUE: indawo efanelekileyo yokuphumla, ukutshaja iibhetri zakho kwaye ujonge ilizwe lethu.
Le cottage yenzelwe ukuhlalisa abantu abayi-6 ngeempelaveki kunye nabahlobo, iiholide zosapho.
IXABISO ESISISEKO 156 I-EUROS ye-4 ABANTU 1 UBUSUKU okanye i-206 ye-euro kubantu abayi-6 (i-3 yokulala kabini) amaphepha anikezelweyo, iitawuli nazo. ikhaya liqukiwe (INOMBOLO YEFONI EFIHLEKILEYO) okanye (INOMBOLO YOMnxeba EFIHLEKILEYO) enkosi
I-cottage isanda kulungiswa ngokupheleleyo.
Uya onawo 110 m² kuquka 3 okulala eliphangaleleyo, ihonjiswe ngenyameko kuquka 1 ngesuti kunye lokuhlambela zabucala (lokulala 3). 1 lokuhlambela ekwabelwana, ikhitshi yaxhobisa ngokupheleleyo, igumbi ophilileyo, igumbi kukuhlamba kwintendelezo zabucala (ipaki imoto) . Amashiti kunye neetawuli zibonelelwa ngoko kungabikho zongezo.
kufutshane neevenkile ezincinci: (icuba / ipizzeria / ivenkile yokubhaka / ibhula / ikhemesti / iposi / ibhanki / umlungisi weenwele / umthengisi weentyatyambo) iDomaine de la Traxéne ikumgama weekhilomitha ezili-10 (imitshato, iisemina, kwindawo entle.)
Le Touquet 40 mns, Boulogne sur / mer 45 mns, Berck sur / mer 40mns, ST OMER isixeko sembali kunye nenkcubeko, idome eWIZERNES.Ipaki yokuzonwabisa yaseDennelys 10mn
ewe intuthuzelo yabo kunye nalo lonke ulwazi malunga nommandla,
Inombolo yomthetho: GTB-2019001
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Verchocq